Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika ‬ - Muqdisho Online
Home Wararka Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika ‬
Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika ‬
Sida ay sheegyaan wararka naga soo gaaray dalka Koonfur Africa waxaa Magalada Magaalada Cape Town ee dalka koonfur Afrika ay kooxo Burcad ah ku dileen muwaadin Somaaliyeed oo ka mid ahaa Soomaalida Ganacsi ahaan u tagtay dalkaas.
Kooxda Burcad ah ayaa muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu Magacaabi jiray Macalin Cabdulaahi Cali Ciise ay ugu tageen Goobtiisa Ganacsi oo ku taalla Xaafadda Zola oo ka tirsan Strand – Cape Town ee dalkaasi Koonfur Afrika.
Mid ka mid ah Ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Koonfur Afrika oo lagu Magacaabo Cabdullaahi Muuse ayaa sheegay in Kooxda Burcada ah ay muwaadinka dhowr xabadood ku dhufteen intaasi kadibna ay qaateen lacago iyo agab kale ee yaallay Goobtiisa Ganacsi.
Dhinaca kale xalay ayaa Koox Burcad ah waxaa ay rasaas ku dhaawaceen Muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid ah Darawalada Taxis-da,waxaaan dhaawiciisa la geeyay Isbitaalka Tygerberg ee Magaalada Cape Town.
Inta badan dillalka ka dhaca Koonfur Afrika ayaa waxaa loo geystaa Soomaalida ku nool dalkaasi, kuwaasi oo ganacsiyo kala duwan leh, dableyda dilalka geysata ayaanan inta badan suuragelin in gacanta lagu soo dhigo.
Previous articleMadaafiic tijaabo ah oo ay rideen ciidanka AMISOM oo walwal ka abuurtay Muqadishu
Next articleNin ajnabi ah oo lagu toogtay magaalada Addis Ababa